येशूले भन्नुभयो: म सत्य हुँ, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गॉड स्विजरल्याण्ड (WKG)
के तपाईंले कहिल्यै आफूले चिनेको र सही शब्दहरू खोज्न संघर्ष गरेको कसैको वर्णन गर्नुपर्‍यो? यो मलाई पहिल्यै भइसक्यो र मलाई थाहा छ कि अरूले पनि त्यस्तै महसुस गरेका थिए। हामी सबै साथीहरू वा परिचित छौं जसको वर्णन शब्दहरूमा राख्न गाह्रो छ। येशूको त्यो समस्या थिएन। उहाँ जहिले पनि स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो, जब यो प्रश्नमा आएको थियो "तपाईं को हुनुहुन्छ?" जवाफ दिन। मलाई विशेष गरी एक ठाउँ मनपर्दछ जहाँ उनले यूहन्नाको सुसमाचारमा भन्छन्: «म मार्ग, सत्य र जीवन हुँ; मेरो कारणले कोही बाबुको नजिक आउँदैन » (जो। १,२))
यस भनाइले येशूलाई अन्य धर्मका सबै नेताहरू भन्दा फरक पार्छ। अन्य नेताहरूले भनेका छन्: "म सत्यलाई खोज्दैछु" वा "म सत्य सिकाउँदैछु" वा "म सत्य देखाउदै छु" वा "म सत्यको भविष्यवक्ता हुँ"। येशू आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ: «म सत्य हुँ। सत्य कुनै सिद्धान्त वा अस्पष्ट विचार होइन। सत्य भनेको एक व्यक्ति हो र म त्यो व्यक्ति हुँ।
यहाँ हामी एक महत्त्वपूर्ण बिन्दुमा आउछौं। यस किसिमको भनाइले हामीलाई निर्णय लिन बाध्य पार्छ: यदि हामी येशूमा विश्वास गर्छौं भने, उसले जे भन्छ उसले हामीले विश्वास गर्नु पर्छ। यदि हामी उहाँमाथि विश्वास गर्दैनौं, तब सबै कुरा व्यर्थ छ, तब हामी पनि उसले भनेका अन्य चीजहरूमा विश्वास गर्दैनौं। त्यहाँ कुनै downplaying छ। कि त येशू व्यक्तिमा सत्य हुनुहुन्छ र सत्य बोल्नुहुन्छ, वा दुबै गलत छन्।
त्यो अचम्मको कुरा हो: त्यो जान्दछु कि उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। सत्यलाई चिन्नु भनेको यसको अर्थ म उसले पछि के भन्छ भनेर पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सक्छु: "तिमीले सत्य जान्नेछौ र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ" (यूहन्ना १:8,32:१) गलातीहरूलाई लेखेको पत्रमा पावलले हामीलाई यसको सम्झना दिलाउँछन्: "ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्रताको लागि स्वतन्त्र पार्नुभयो!" (Gal.5,1)।
ख्रीष्टलाई चिन्नुको मतलब सत्य यो छ कि यो थाहा पाउनु भनेको उहाँमा हुनुहुन्छ र हामी स्वतन्त्र छौं। हाम्रो पापको इन्साफ हुनु अघि स्वतन्त्र र अरूलाई त्यहि क्रान्तिकारी प्रेमले स्वतन्त्र पार्नुहोस् जुन उसले आफ्ना साथीलाई पृथ्वीमा आफ्नो जीवनको हरेक दिन देखायो। हामी सबै समय र सम्पूर्ण सृष्टिमा उहाँको सार्वभौम शासनको विश्वासमा स्वतन्त्र छौं। किनभने हामी सत्य जान्दछौं, हामी यसलाई विश्वास गर्न सक्दछौं र ख्रिष्टको उदाहरण अनुसार बाँच्न सक्दछौं।